ခံစားချက်တွေရှုတ်ထွေးနေပုံရတဲ့တူချယ် (Press Con) – Miracle Times
လူတန်အသင်းနဲ့ကစားရမယ့်ပွဲမတိုင်ခင် ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တူချယ်ဟာ ကွင်းတွင်းကိစ္စရပ်တွေထက် ကွင်းပြင်ပက စစ်ရေးဆိုင်ရာ နဲ့အသင်းရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေကိုပိုပြီးမေးမြန်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အေဘရာမိုဗစ်ချ်ဟာ ချဲလ်ဆီးနဲ့မပတ်သတ်တော့ပဲ တာဝန်လွှဲပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ခင်ဗျားရဲ့ နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ဘာအပြောင်းအလဲတွေရှိလာခဲ့သလဲ?
“ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က ကျွန်တော်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ ပထမအသင်းကြီးကို ကိုင်တွယ်နေရတဲ့ နည်းပြတစ်ယောက်အတွက်တော့နေ့စဥ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအပေါ် သက်ရောက်မှု ကြီးကြီးမားမားမရှိလှပါဘူး။ ကျွန်တော် ပီတာချက်နဲ့ နေ့စဥ်ဆွေးနွေးတယ်။ လိုအပ်တာတွေအတွက် မာရီနာနဲ့တိုင်ပင်တယ်။ အသင်းအတွက်ပိုကောင်းမယ့်အရာတွေအတွက် လုပ်စရာရှိတာလုပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အထွေအထူးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် “
လက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို ခင်ဗျားသိမှာပါ။ အသင်းမှာ ရိုမန်ရှိနေခြင်းက ပြသနာတစ်ခုလို့ ခင်ဗျားထင်ပါသလား။
ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကို ထင်မြင်ချက်ပေးဖို့ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးကျယ်လွန်းပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်း ကျွန်တော်မသိထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဘောလုံးထက်အရေးကြီးတာတွေအများကြီးရှိနေတာကတော့ သေချာပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲလဲ အပါအဝင်ပေါ့ဗျာ။ အေဘရာမိုဗစ်ချ်ရဲ့ ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါက ရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
ဘောလုံးအကြောင်းထက်အသင်းရဲ့ ကိစ္စတွေကို အဓိကထားဖြေဆိုနေရတဲ့ တူချယ်အတွက် လီဗာပူးနဲ့ပွဲစဥ်တုန်းကအကြောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ တူချယ်က
“ အသင်းကပုံစံကောင်းရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ပိုတွေတအားထမ်းနေခဲ့ရပါတယ် “
ဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများပြားနေတဲ့အခြေအနေကို ရည်ညွန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူတန်နဲ့ ကစားရမယ့်ပွဲအတွက်လည်း ရှိတဲ့ကစားသမားများထဲကပဲ ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားခဲ့တာပါ။
လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြားကနေ ဘယ်လိုမျိုးအာရုံမပြန့်လွင့်အောင်ကြိုးစားနေရသလဲလို့မေးမြန်းချိန်မှာတော့ တူချယ်အနေနဲ့ ခံစားချက်ရောပြွမ်းတဲ့အဖြေကို စိတ်ရှုတ်လာဟန်နဲ့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ နားထောင်ဗျာ …. ကျွန်တော် ဘယ်နှကြိမ်ဖြေရမလဲ .. စစ်ပွဲဟာ ကြောက်စရာတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီအဖြေအပြင်တခြားဖြေစရာမရှိပါဘူး။ ဥရောပမှာရှိနေတဲ့လူတိုင်းဟာ ဗုံးသံတွေကိုပဲနားထဲမှာ ကြားယောင်နေရတာပါ။ ဒါကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူး။ တချိန်ထဲမှာပဲ ကိုယ့်အလုပ်တွေကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်နေရတာပါပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူပါပဲ “
စစ်ပွဲအကြောင်းမေးဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကို တူချယ်က ကြားဖြတ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ ကျွန်တော့်ကို ထပ်မမေးပါနဲ့တော့ ။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဝမ်းနည်းကြောင်းပဲပြောနိုင်တာပါ။ ကျွန်တော်လဲ စစ်ပွဲဆိုတာကို မကြုံဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က သိပ်ကံကောင်းပြီး အခွင့်ထူးခံစားခွင့်ကိုရနေကြသူတွေပါ။ ဒီနေရာမှာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ထိုင်ပြီးလုပ်နိုင်သမျှကို အကောင်းဆုံးလုပ်ခွင့်ရနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းတွေမေးတာကိုရပ်လိုက်ပါတော့။ ကျွန်တော့်မှာ အဖြေမရှိပါဘူး “ လို့ ဒေါသနဲ့အတူပြန်ဖြေသွားခဲ့တာပါ။
သူနဲ့သူ့အသင်းသားတွေဟာ အားကစားဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို အာရုံစိုက်ထားပြီး ပရိတ်သတ်တွေကို ဖျော်ဖြေဖို့ကိုသာလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုရင်းအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အသင်းရဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ရှုတ်ထွေးလာနေပြီး ရိုမန်ကလည်းအသင်းကိုရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ဝယ်ယူလိုသူတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် အသင်းရဲ့တန်ကြေးကအတော်လေး ကြီးမြင့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ အသင်းရဲ့ ငွေစာရ​င်းထဲကနေ ရိုမန်ကို ပြန်ဆပ်ရမယ့် အကြွေးတင် ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံခန့်ရှိနေပါတယ်။